Skål loka manokana 2020 Manome voninahitra Antonio Percario
Home » Lahatsoratra farany farany » Awards » Skål loka manokana 2020 Manome voninahitra Antonio Percario
Awards • Vaovao Mafana Eoropeana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Italia • Vaovao • Tourism • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Skål loka manokana
Nandritra ny Fivoriamben'ny Jeneraly fanaon'ny Skål International, nanjary saika sambany tamin'ny tantarany, nanolotra ny Skål Special Awards 2020 ny fikambanana.
Peter Morrison, filohan'ny Skål International tamin'ny taona 2020, dia nanome an'i Antonio Percario, Skål International Rome ary Tale iraisam-pirenena tamin'ny loka Espål manokana, “Ho an'ny fandehanana lavitra amin'ity taona mbola tsy nisy toa azy ity. ”
Ny antony manosika ny loka dia vokatry ny asa tsy manam-paharoa nataon'ny filoha teo aloha, amin'ity taona krizy lalina ity eo amin'ny sehatry ny fizahantany. Manokana, mihevitra izy fa:
Ny fikarohana mitohy ny fomba hanovana ny Fikambanana avy amina andianà hetsika "confivial" ho tena "fitaovana miasa" ho an'ny Mpikambana, na eo amin'ny Club na International level.
Ny valin'ny fifandraisana sy fanaparitahana ny marika Skål International amin'ny alàlan'ny fisian'ny gazety tsy tapaka, amin'ny foara, amin'ny fotoanan'ny andrim-panjakana manan-danja ny fizahan-tany.
Ny fanoloran-tena iraisampirenena eo amin'ny sehatry ny mpitantana izay nanavahan'ny filoha teo aloha Percario ny tenany niaraka tamin'ny antontan-taratasy fandaharana sy famintinana izay nitarika ny asan'ny Birao.
Ny fanavaozana mitohy amin'ny fomba fifandraisana eo amin'ny klioba sy ny mpikambana, ny klioba ary ny andrim-panjakana, ny klioba sy ny lamba, ny klioba ary ny tsena; ny fanangonana fitaovam-pianarana betsaka ho an'ny mpikambana hanome mandrakariva ny angon-drakitra farany indrindra, ny hevitra manana fahefana indrindra, ary ny vaovao mifandraika indrindra amin'izao fotoana izao.
Izany asa rehetra izany dia mifandraika amin'ny filan'ny nofo sy ny angovo ampiasain'ny fikambanana mba hanomezana andraikitra lehibe an'i Skål Rome na dia eo aza ny krizy lalina indrindra sy lava indrindra eo amin'ny sehatra.
Ny filoha Paolo Bartolozzi sy ny birao dia mankasitraka ny filoha teo aloha Antonio Percario tamin'ny zava-bitany nandritra ny taona maro ary manohy manao an'izany mandritra ny volana amin'ny krizy COVID sy amin'ny fanomanana tolo-kevitra vaovao mandritra ny volana sy taona ho avy.
Prof. Antonio Percario dia talen'ny iraisam-pirenena an'ny Skål International, mpiara-manorina ny SKÅL Europe, talen'ny Skål Italia, MDO, ary lehiben'ny biraon'ny asa fanaovana gazety any Skål Roma.